आफ्नो सन्तानलाई परीक्षाको अंकबाट आंकलन नगर्नुहोस् « LiveMandu
१८ असार २०७६, बुधबार ०७:००
अस्ति एउटा १७ वर्ष किशोर उसका अभिभावकद्वारा ल्याइयो । अति डराउने, काममा ध्यान दिन ग्राहो हुने, भोक र निद्रा नलाग्ने, आफुलाई कसैले माया गर्दैन भन्ने सोचले ग्रस्त त्यो किशोर आमाबुवाको अगाडि नै पर्न चाहदैनथ्यो । उसको यस्ता समस्याहरु पहिले पनि थिए । तर, एसइइको परिणामपछि भयानक नै भएको कुरा उसका अभिभावकले बताए । शुरुदेखि नै खासगरी बुवाको परीक्षामा ‘एकदमै राम्रो’ अंक ल्याउनुपर्ने, उनले सोचेको कलेजमा भर्ना हुनुपर्ने र इन्जिनियरींङ नै गर्नुपर्ने दवाब जहिले पनि त्यो अबोध मनमा बनिरह्यो । कुराकानीको दौरानमा किशोरको डर, आमाबुवाप्रतिको घृणा अति धेरै देखिन्थ्यो । आमाबुवा आफ्ना बच्चामा यस्तो समस्या देख्दा निकै अचम्भित भइरहेका थिए । आफ्नो छोराले यत्रो दवाब लिनुपर्ने कारण आमाबाबुको आँखाले देख्नै सकिरहेको थिएन । यति साधारण कुरा एउटा बाबुआमाले देख्न नसकेको देखेर म वाल्ल परिरहेकी थिए र भित्रभित्रै रिस पनि अनुभूत हुन थालिसकेको थियो । तर यस्तो अवस्था मेरो लागि नौलो चाँही होइन । उनीहरुको नजरमा आफ्नो छोरालाई उनीहरुले संसारकै माया दिएका थिए । यो माया छोराले पाउनुपर्ने अंकभन्दा माथि कहिल्यै उठ्न सकेन । पढाईलाई लिएर आफ्नो छोराको सोच कस्तो छ भन्ने कुरा बुझेनन्, बुझ्न चाहेनन् । समाजको अगाडि छोराको अंकको महत्व उसप्रतिको मायाभन्दा कैयौं गुणा धेरै थियो । तर यो त उनीहरुको विचारमा माया थियो । १७÷ १८ वर्षको छोरो वा छोरीले आफुलाई के मन पर्छ भन्न सक्दैन, उनीहरुको नजरमा । उसलाई सदैव आज्ञाकारी’ बनाए उसका आमाबाबुले । पढाइलाई लिएर दिइने यो दवाबले छोराको अबको पढाईको स्थिति, उसको मनोदशाबारे उनीहरुले कहिल्यै सोचेनन् । छोरा ज्ञानी छ’ म कहाँ ल्याउदा पनि धेरै पटक उनीहरुको मुखबाट निस्केका शब्दहरु यिनै थिए । आफुले जे भन्यो त्यही मान्ने, प्रतिप्रश्न नगर्ने, चूप लागेर सुन्ने, आफ्नो मत नराख्ने, प्राणीलाई भनिन्छ शायद ज्ञानी, अन्यथा ऊ बद्मास, खत्तम, मुखाले र विद्रोहीमा गनिन्छ । यो छ हामी अभिभावकको सोच ।
हुन त हाम्रो शैक्षिक प्रणाली पनि त्यस्तै छ, हाम्रो परिवेश पनि त्यस्तै छ । औलामा गन्न सकिने थोरै मात्र पेशालाई ‘ ठूलो’, वा ‘सभ्य’ र शारीरिक श्रम बढी लाग्ने पेशालाई ‘ सानो’ वा ‘ असभ्य’ भनेर हेर्ने र हेर्न सिकाउने यो समाज । विज्ञानका सिद्धान्त र गणितका हिसाब किताबबारे अरुले नबुझिने भाषामा बोल्न सक्यौं, अंग्रेजीमा कुरा गर्न सक्यौं भने मात्र हामी बुद्धि भएका कहलिन्छौं । तर्कवितर्क गर्नसक्ने मानिस बुद्धिमान, संगीत, कला र साहित्यको चर्चा गर्ने, चित्र बनाउने, बालीनाली उमार्ने, खेल उत्कृष्ट खेल्नसक्ने जस्ता फरक धारका विधालाई करियर बनाउने मानिस अव्यवहारिक कहलिन्छ मेरो समाजमा । हाम्रो स्कूल कलेजका परीक्षाको मापदण्ड केवल यिनै कुरामा मात्र सिमित रहेको छ । अब, यस्ता क्षेत्रमा व्यक्तिको अभाव भएपछि अरुले पछ््याउने मानिस पनि नहुनु स्वभाविक हो ।
सन्दर्भ हो, विद्यालयमा प्राप्त गर्ने प्राप्तांक र त्यसको महत्वको आयाम । कुनै पनि विषय पढेर जाँच दिएर प्राप्त गर्ने अंकको महत्वै छैन भन्नु उपयुक्त हुँदैन, यो आलेखको उद्देश्य यो होइन पनि । पहिले पनि एसएलसीको रिजल्टपछि हुने दुर्घटनाहरु हरेक वर्ष हामीले भोगेकै हो । अहिले पनि त्यो क्रम जारी नै छ । त्यस्तो शैक्षिक प्रणालीको मूल्याकंन, जहाँ किशोरकिशोरी आफ्नो जीवन नै समाप्त गर्न उद्धत हुन्छन्, के त्यो परिवर्तन गर्न जरुरी छैन ? के त्यसप्रतिको हाम्रो सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छैन ?
एकछिन चर्चा गरौं, ग्रेड किन त्यत्ति महत्वपूर्ण छैन जति हामीले बनाएका छौं भन्ने विषयमा । क्षमता भनेको व्यक्तिले जे गर्न सक्छ त्यो हो भने ग्रेड वा प्राप्तांक भनेको एउटा खास विषयमा निश्चित दायरामा रही व्यक्तिले जे गरिसकेको छ त्यो भन्ने बुझाउँछ । शिक्षकले कुनै एक विषयमा आफ्नो ढंगबाट केही सोध्छ, त्यहीको मापदण्डमा रही आफुले पढेको आधारमा विद्यार्थीले जवाफ लेख्छ वा भन्छ । उक्त शिक्षकको ठाउँमा अर्कै शिक्षक भए सम्भवतः अर्कै प्रश्नावली हुन्थ्यो, जवाफको रुपमा अर्कै उत्तरको अपेक्षा हुन्थ्यो । भनेपछि विद्यार्थीहरुले पढेको हरेक विषयमा फरक फरक ढंगले मूल्यांकन हुने स्वभाविक नै भयो । अर्को कुरा कुनै पनि ग्रेड र प्रणालीले पुरातन सोचबाट बाहिर आई फराकिलो सोच बनाउन र समस्या समाधान गर्ने व्यक्तिको खुबीलाई मापन गर्दैन । यसले नेतृत्व सीपको मापन गर्दैन, यसले सामाजिक सीपबारे बताउदैन । हामी अभिभावक बुझ्न चाहदैनौं कि यी सीपहरु जीवनमा हामीले स्कुल कलेजमा प्राप्त गर्ने अंकभन्दा कैयौं गुणा महत्वपूर्ण छन् । जीवनमा सफल हुनको लागि मानिस जहाँ जस्तो पेशामा होस्, यी सीपहरुबिना अपूरो हुन्छ । यदि हामीले धेरै पैसा कमाउनेलाई सफल भन्छौं भने त मेरो भन्नु केही छैन । तर कमाएको त्यो पैसाको उचित उपयोग, प्रयोग र प्रत्युपादन गर्न विद्यालयमा प्राप्त गरेको अंकले मात्र पर्याप्त हुँदैन । अभिभावकहरु, यो कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईको र तपाईको सन्तानको जीवन सफल हुनेछ । आखिर अभिभावकको रुपमा आफ्ना छोराछोरीलाई कहाँ देखन चाहनुहुन्छ ।
सबै बच्चाहरु एकै हुँदैनन्, सबैमा एउटै खुबी पनि हुदैन । अभिभावकको रुपमा आफ्नो बच्चामा के छ, उसलाई के गर्न मन लाग्छ, उसमा के कस्ता सीपहरु छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । यी कुराहरु अभिभावक र शिक्षकभन्दा बढी कसले बुझ्न सक्छ र ? यो बुझाई आंकलन गर्न विद्यालयको ग्रेडलाई मात्र आधार नबनाउनुहोस् । पाठ्यक्रममा राखेका विषयबाहेक अरु धेरै विषयहरु छन्, जहाँ तपाईको बच्चाको भविष्य हुन सक्दछ । किन हामीले आफुलाई र हाम्रा बच्चाहरुलाई पुरातन शैलीको शैक्षिक परिभाषामा सिमित राखिरहने ? हामी हाम्रा बच्चालाई अझ आफुलाई विश्वास गर्न डराउछौं । यो डरले हामीलाई विज्ञान र हिसाबका विषयहरुलाई मात्र जीवनको दिगोपनको कसी देख्दछ । यसले हामीलाई प्रयोगहरु गर्न दिदैन, यसले हामीलाई सिर्जनशील बनाउदैन, यसले हामीलाई हाम्रा क्षमताको भरपूर प्रयोग गर्न दिदैन । यस्तो अवस्थामा स्वभाविक हो यसले हामीलाई संकुचित बनाउछ । केही समयपछि पछाडि फर्केर हेर्दा निराशा र असन्तुष्टि मात्र दिन्छ । कुनै पनि अभिभावकले आफ्ना सन्तान असन्तुष्ट होउन् भन्ने चाहना राख्दैन । विभिन्न अनुसन्धानहरुले भन्छ, मानिस सफल त्यो कुरामा हुन्छ, जुन कुरा गरीरहन ऊ मन पराउछ र त्यो जान्दछ पनि । अन्ततः हामीले खोजेको कुरो हाम्रो सन्तान आफ्नो खुट्टामा उभियोस् । यो बुझौं कि पढाईको ग्रेडले सबै कुरा सिकेको भन्ने बुझाउदैन । तसर्थ उसको ग्रेडले वा प्राप्तांकले मात्र उसको भोलीका सफलताको मापन नगर्नुहोस्, यो गलत हुनेछ । हुनसक्छ तपाईको बच्चा भोली एउटा सफल कलाकार, खेलाडी, गायक जे पनि बन्नसक्दछ । हाम्रो सही मार्गनिर्देशनले हाम्रो बच्चा जे बन्छ, आत्मनिर्भर, जुझारु र जिम्मेवार नागरिक बन्नेछ । अन्ततः ऊ सफल हुनेछ ।